Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Saudi Arabia njem njem » Saudi Arabia amachibidoro ụmụ amaala na-enweghị ọgwụ mgbochi ịga ọrụ
Nata ogwu ogwu coronavirus ga-abụ ihe dị mkpa maka ọnụnọ ndị ọrụ n'ebe ọrụ maka mpaghara niile
Ndị ọchịchị Saudi na-akwado ụmụ amaala ka ha kwadebe maka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa
Ndị dọkịta Saudi enyela ihe karịrị nde ọgwụ mgbochi iri ruo taa
N’izu gara aga, Saudi Arabia kpebiri igbochi ụmụ amaala na-enweghị ọgwụ mgbochi ịga mba ọzọ
Nke Saudi Arabia Ministry of Human Resources na Social Development mara ọkwa na ụmụ amaala nke alaeze ahụ anaghị egbochi ọgwụ mgbochi megide COVID-19 amachibidoro ịga ọrụ.
“Inata ọgwụ ogwu coronavirus jab ga-abụ ihe dị mkpa maka ọnụnọ nke ndị ọrụ n’ebe ọrụ maka mpaghara niile - ọha na eze, ụlọ ọrụ nzuzo na ndị ọrụ ebere,” ka ndị ọchịchị Saudi mara ọkwa. Ya mere, ndị ọchịchị na-agwa ụmụ amaala ka ha kwadebe maka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
E gosipụtabeghị ụbọchị ụbọchị nke iwu ọhụụ na-abanye na mmetụta. Mịnịstrị ahụ ekwela nkwa ịkpọsa ya n’oge na-adịghị anya, yana ịkọwapụta otu iwu ga-esi kwalite.
Na ngwụcha izu gara aga, Saudi Arabia kpebiri igbochi ụmụ amaala na-enweghị ọgwụ mgbochi ịga mba ọzọ. Site na Mee 17 nke afọ a, ọ bụ naanị ndị ejirila ọgwụ mgbochi otu ma ọ bụ abụọ ọgwụ ụbọchị iri na anọ tupu njem ahụ ga-enwe ike ịhapụ mba ahụ.
Ruo ugbu a, ndị dọkịta nke alaeze agbaala ihe karịrị 10 nde doses n'ime ọnụ ọgụgụ Saudi Arabia nke nde mmadụ 34.